Bitcoin ny habetsahan'ny varotra amin'izao fotoana izao ary ny angon-drakitra ara-tantara avy amin'ny tombontsoa Bitcoin hatramin'ny fanombohana ny varotra amin'ny tsena fifanakalozam-bola.
Ny kapitalisma ankehitriny ho an'ny Bitcoin dia 0 dolara amerikana .
Isika isan'andro dia mirakitra fanovana ao anatin'ny Bitcoin renivohitra. Ny haben'ny vola namoaka Bitcoin vola madinika dia aseho. Bitcoin ny kapitalita dia kajy miorina amin'ny fifanakalozana fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly manerana izao tontolo izao. Bitcoin capitalization = 0 dolara amerikana.
Ny habetsahan'ny varotra Bitcoin ankehitriny dia 0 US dollars .
Bitcoin fitambaram-barotra ankehitriny dia $ total 0. Androany, ny varotra Bitcoin dia nisy fifanakalozana fifanakalozana maro samihafa. Bitcoin fifanakalozana ara-barotra an-tserasera amin'ny fifanakalozana fifanakalozana marobe, dia asehontsika ny fitambaran'ny varotra Bitcoin isan'andro. Bitcoin dia mitombo amin'ny $ 0.
Bitcoin tabilao kapitaloka
Bitcoin renivohitra amin'ny tabilao mandritra ny taona maro. 0% - fiovana amin'ny fanitarana ny tsena ny Bitcoin isan-kerinandro. Bitcoin fanovana famatsiam-bola ho an'ny taona dia 0%. Bitcoin ny ambany tsenan'ny tsena omaly.